OpenShift मा ASP.NET: ASP.NET मा सुरू गर्दै
OpenShift मा ASP.NET को परिचय किन?
तपाईंको परियोजना बनाउनुहोस्
तपाईंको टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्
तपाईंको नियन्त्रक छोडेर
OpenShift को उपयोग गरेर ASP.NET विकास मा, मैले पाया कि ASP.NET मा शुरू को लागि केहि ट्यूटोरियल बाहिर हो
क) अत्यधिक बिग्लुङ मन, र
ख) यसले कसरी कार्य गर्दछ भन्ने भित्तामा नमान्नुहोस्
यदि ओपनशफ्ट मा एएसपी.नेट को उपयोग गरेर रहयो हो, तपाईंलाई यसमा बुझन को क्षमता हुनु पर्छ!
यस अनुदेशी व्यायाम व्यवस्था मा, म तपाईंलाई कसरि ASP.NET कार्य गर्दछ र तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ कि एक बुनियादी समझ को मौका ओपन गर्न चाहते हो कि तपाईं OpenShift मा आफ्नो उपक्रम डालने देखि पहिले। हामी त्यो लेख छिटो छिटो लेख्नेछौं।
यस अनुदेशी व्यायाम को 1 र2मा भागहरु मा, म दृश्य स्टूडियो समुदाय 2015 मा लेआउट को उपयोग गरेर तेजी देखि शुरू मा जा रहयो हूँ। यसले यो भागमा विन्डोजको लागि हुनेछ। कुनै पनि अवस्थामा, म भिजुअल स्टुडियो कोडमा लेआउटको बिना सबै चीजको साथ तल शीर्षमा चलाउनेछु जुन अनुशासनिक व्यायाम पछि, तपाइँ लिनक्स वा म्याक र अतिरिक्त विन्डोजसँग सम्बन्धित हुनेछ। यदि तपाइँ विन्डोजको प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाइँ कुनै पनि अवस्थामा भागहरूमा 1 र2पछि लिन सक्नुहुनेछ कि कसरी .NET कोरमा REST अन्तबिन्दुमा कसरी बनाउने भन्ने बारे सोच्न सोच्न सक्छ।
हामीले सुरू गर्नु पर्छ!
खण्ड 1 - ASP सेवा सेटअप गर्नुहोस्
एक नियन्त्रक को उपयोग को आधारभूत एएसपी सेवा गरेर तपाईं देखि शुरू हुनेछ। म सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईं कसरी कंसोलर्सहरू MVC लाई पूर्ण रूपमा सार्न अघि कसरी प्रकार्य गर्नुहुन्छ।
दृश्य स्टुडियोमा (म सामुदायिक संस्करण 2015 प्रयोग गर्दैछु) फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र पछि नयाँ परियोजना।
टेम्प्लेटहरू -> दृश्य सी # -> वेब आयोजक, एएसएस.नेट कोर वेब अनुप्रयोग (.NET कोर) चयन गर्नुहोस्। यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं .NET कोर को चयन गर्नुहोस र .NET फ्रेमवर्क को रूप मा यो .NET क्रस-चरण लाइब्रेरी हो।
आफ्नो उद्यम को नाम दर्ज गर्नुहोस - यो केहि चीज जो चाहानु सक्छ, यस निर्देशात्मक अभ्यास मा म यो WowWorld बुलाउनेछु।
बेशक, यो स्थान तपाईंको भिजुअल स्टुडियो प्रोजेक्ट आयोजकमा हुनेछ, यस घटनामा यो परिवर्तन गर्न संकोच नगर्नुहोस् जुन तपाईले अन्यथा अनुदेशात्मक व्यायाम भण्डार गर्ने मौकाबाट किक हुनुहुनेछ।
हामीले अर्को व्यवस्था गर्न आवश्यक छ (जवाफले एक अक्टोबर जस्तै समान विविध गतिविधिहरू साथ काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ) र हामीलाई व्यवस्था केहि गर्न आवश्यक छ।
बेशक, व्यवस्था तपाईंको उद्यम जस्तै नै नामित छ। यो शानदार छ ठीक छ, त्यसैले हुन सक्छ यसलाई छोडेर। जस्तो कि यो हुन सक्छ, तपाईले यो घटनामा पुन: नामाकरण गर्न अधिक भन्दा बढी हुनुहुन्छ कि तपाईं मौकाबाट किक पुग्नु हुनेछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि एक निर्देशिका बनाइयो - यो गलत मौका हो कि तपाईंले के गरिरहनुभएको कुरा बुझ्नुमा महत्त्वपूर्ण छैन, तर यसको तुलनामा चीजहरू राखिएको एकदम राम्रो सम्झौता गर्दछ।
तपाईंसँग पनि हुन सक्छ भिजुअल स्टुडियोमा स्वाभाविक रूपमा गित भण्डार बनाइएको छ। म यो काम गर्दैन किनभने यो एक अनुदेशी अभ्यास हो, अझै ठूलो स्तरको विस्तारको लागि, तपाईलाई आवश्यक पर्न सक्छ।
जब तपाइँ प्रत्येक सेटिङको साथ सामग्री हुनुहुन्छ भने, निम्न स्ट्राइकमा सार्नको लागि ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँ तपाईंले तीन छनौटहरू हुनुपर्छ। यो प्राविधिक अभ्यासको लागी, तपाईंले वेब एपीआई छनौट रोज्न आवश्यक छ। म भविष्यमा ट्यूटोरियलहरूसँग अर्को दुईमा जान्छु।
यस अवसरमा तपाईले यो कार्यक्रममा एक कार्यक्रम सञ्झ्याल (वा ट्याब) खोल्नुहुनेछ र तपाईलाई ... / प्रोग्रामिङ इन्टरफेस / मानहरू / - जुन जेएसओएस क्लस्टरले यो प्रदर्शन गर्नेछ:
आफ्नो कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र तपाईंले लाल स्क्वायर कोचलाई निचोड गरेर आफ्नो उद्यम रोक्न सक्नुहुन्छ (जसले माउस-ओभर जब "डिबग छोड्नुहोस्") यसले तपाईलाई बदल्न सक्ने लक्ष्यको साथ।
समाधान एक्सप्लोररमा, समाधान नाममा जानुहोस् -> स्रोत -> परियोजना नाम -> नियन्त्रकहरू -> ValuesController.cs र यसलाई खोल्नुहोस्।
उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यो HTTP विधि हो - HttpGet` मिलिएको एउटा वेब हो जुन वेब पृष्ठमा प्राप्त हुनको लागि प्रयोग गरिएको छ। सामग्रीहरू अन्वेषण स्ट्रिङ कारकहरूको रूपमा प्रत्येक विधिमा पास गर्न सकिन्छ (वा पाठ्यक्रम डेटा - पछि मार्गहरूमा थप)।
नियन्त्रणकर्ताहरू लिफाफेमा दाँया-क्लिक गर्नुहोस् र अर्को कम्प्युटर बनाउनुहोस् जुन CatController भनिन्छ।
Microsoft.AspNetCore.Mvc लाइब्रेरीलाई तपाईंको कोड पूर्ण राख्न सहयोग पुर्याउनुहोस्।
साथ माई विधि तपाईंको कक्षामा थप्नुहोस्:
अब कोड चलाउनुहोस्। तपाईंको कार्यक्रममा, इन्टिक्स / बिट / बिल / स्थानीय होस्टलमा: ##### वास्तविक जीवनमा तपाईंको काम हेर्न।
तपाईं HttpGet ("/ बिल्ली / बिल") विकसित गर्दै हुनुहुन्छ HttpGet ("cat / bill") को प्रतिबिम्बित गर्न र स्ट्राइक विधेयक खोल्नको लागि pubic string "Yowl ()" विधिको नाम बदल्दै।
त्यसो त नोट गर्नुहोस् नियन्त्रक वा विधिको नाम नराम्रो प्रभाव पार्छ। यो सबभन्दा मिल्ने म्याच बनाउन नियमित अभ्यास हो, त्यसैले कोड ताजा गर्नुहोस्:
अब हामी कसरी अर्को बिरालो समावेश गर्दछौं!
अब तपाई कोड चलाउन र आफ्नो कार्यक्रम खोल्न सक्नुहुन्छ: ... / cat / steve /
हामी बिरालोहरू सहित जारी राख्न सक्छौं, तर हरेकको लागि एक तरिका बनाउने तरिका सजिलै चिन्ताउन सक्दछ, त्यसैले हामी कसरी त्यो परिवर्तन गर्छौं। हामी cat name को लागि एक विवाद को उपयोग गर्न सक्छन् कि प्रश्न स्ट्रिंग को रूप मा पारित गरिनेछ। त्यसैले हाम्रो कोड अब यो समान हुन सक्छ:
अब कोड चलाउनुहोस् र तपाईंको ब्राउजरलाई सीधा गर्नुहोस्: ... / बिल्ली? बिल्ली = बिल अनि तेस्पछि ... / बिल्ली? बिल्ली = स्टिभ
अब हामीसँग समान तरिकामा बिल्लियां छ, तर यूआरएल केहि हद सम्म छ। यो मार्गहरू मार्फत जाने कारकहरू होईन। सबैलाई आवश्यक छ कोडमा सानो परिवर्तन छ:
यसबाहेक, अब हामी प्रयोग गर्न ब्याकप्याडल गर्न सक्दछौं ... ... / बिट / बिल र ... / बिट / स्टिभ।
यो यो प्रस्तुतिको प्रारम्भिक खण्डको लागि हो। बिल्लियों को लागि यी दुई तरिकाहरु र उनि के भन्नुहुन्छ, तपाईं एक एएसपी.नेट वेब सेवा को दो एपीआई कलहरु संग शुरू गर्न को लागी शुरू गरेको छ! मेरो अर्को पोस्ट डेटा प्राप्त गर्दै र सेटिङहरू, र कसरी सत्रहरू काम गर्ने चर्चा गर्नेछ, किनकि हामी बिरालो बढ्दै जान्छौं।
रेड Hat प्रमाणित ईन्जिनियर बनें | RHCE प्रमाणीकरण
RHCE प्रमाणीकरण - कसरी रेड ह्याट प्रमाणित ईन्जिनियर बनने